APPLE "BERKUTOVSKOE": SHARAXAAD, BEERITAANKA IYO DARYEELKA, SAWIR - GEED GEEDEEDKA
Dhirta Apple waa mashruuc beerta muddada dheer ah, waana in aad si habboon uula socotaa, sababtoo ah waxaad dooran geed geedo kuu adeegi doonta sanado badan.
Wax walba waa in la tixgeliyaa: sifooyinka daryeelka, dhalidda, wakhtiga firaaqada, wakhtiga kaydinta iyo waxyaabo kale oo badan.
Wixii cimilada ee kooxda dhexe, geedka tufaaxa Berkutovskoe waa kaamil ah. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ee noocyada kala duwan ayaa soo jiidata bannaanka u joojiya doorashadooda. In this article waxaan fiirin doonaa waxa geedka Berkutovsky dhirta waa: sharaxaad, sawir, dib u eegista ee bannaanka.
Geedka dhirta "Berkutovskoye" magaciisa waxaa lagu magacaabaa magaca mid ka mid ah (ama halkii ka mid ah) mid ka mid ah qorayaasha ka qaybqaata taranka - O. D. Berkut. Qoraaga kale ayaa ahaa G. V. Kondratiev. Kala duwan jiilaalkaan waxaa lagu horumariyey Saldhigga Goobta Dhirta ee Saratov.
Ma taqaanaa? Xaruntan waxaa la asaasay sannadkii 1932 iyadoo ay ugu wacan tahay dadaalka Michurin. Olga Berkut wuxuu ka shaqeeyey halkan 1937 ilaa 1960. Noocyada ay abuurtay iyada ayaa weli lagu koray miisaan warshadeed.
Waxaa la helay natiijada ka dhalatay dhirta cortland cortland leh manka isku dhafan ee noocyada kala duwan Anis Rose-striped iyo Antonovka caadiga ah.
Sanadkii 1988, noocyo kala duwan ayaa lagu soo galay diiwaanka Gobolka ee Guulaha Abuuridda, iyo 1991-kii waxaa la siiyay bilada Dahabka ah ee Xarunta Dhamaan Dhismaha Caalamiga ah (Xarunta Dhamaan Ruushka).
Sannadkii 2005, noocyada kala duwan waxay ku hoos qoran yihiin magaca "noocyo dahab ah oo dalagyada miraha ah".
Geedka tufaaxa "Berkutovskoye" waxaa loo sameeyay gobollada Volgograd iyo Saratov, taas oo ay noqotay noocyada kala duwan ee ugu koray qiyaasta warshadaha.
Xaaladaha jawiga koonfureed, miraha "Berkutovsky" waxay ku kala duwan yihiin macaan. Waqooyiga geedka tufaaxa ayaa koraaya, daryeel dheeraad ah ayaa loo baahan yahay.
Noocyo kala duwan ayaa laga doorbidi karaa kuwa ajnabiga ah, marka la eego xaaladooda cimilada, maadaama jirkooda uusan ahayn tusaale ka sarreeya.
"Berkutovsky" - noocyo gaar ah, kaas oo loo tixgeliyo in ay u daneynayaan guud ahaan:
dhalidda sare - hal geed wuxuu awoodaa inuu bixiyo ilaa 70 kiilo oo miro ah;
xasiloonida fruiting sanadlaha ah;
awood u lahaanshaha nolol maalmeedka khudaarta - in laga saaro geedkii bishii Oktoobar illaa bishii Maarso;
abaarta iyo caabbinta barafka;
Waxaa laga yaabaa in sheyga mid ka mid ah caato ah, darajada laudatory ee ka mid ah mudnaanta noocyada kala duwan waa faa'iido - Berkutovsky ma jecla cimilada humid, taas oo ay u nugul yahay infekshanka xagta oo caarad.
Ma taqaanaa? Dadka deggan Yurub waxay u adeegsadeen geedka dhirta duurjoogta ah tan iyo dhagaxii dhagaxa, taas oo caddaynaysa joogitaanka qashinka dhirta ee geedkan ee lakabka dhaqanka ee goobaha inta lagu guda jiro xayawaanka ee Switzerland.
Geedku waa dhexdhexaad, oo koraya 3 mitir oo dherer ah, sidaas darteed in goosashada lama dhibo. Tigreega isku dhafan ee iskutallaabta ah maaha inuu noqdo mid cufan, halkii aan dhicin. Jirka cirifka dul saaran waa cawl, casaan.
Laamuhu waxay u barbardhigayaan dhulka oo waxay udhigi karaan garbaha. Dhexdhexaad ah oo cufan oo qummani ah, oo leh midab casaan leh. Lantils kala firidhsan jirey caleemaha waxay leeyihiin midab kareem ah. Kelyuhu waxay leeyihiin qaab wareegsan iyo cabbirka celcelis ahaan, waxaa lagu cadaadiyaa biqil.
Caleemaha waa wareegsan yihiin, oval qaab ah, at dhamaadka waxaa lagu tilmaamay, qoyan dhererka. Qalabka laftiisu wuxuu leeyahay hodan qani ah, wax yarna wuu qarxay, hooskii jilicsanaa. Petioles ayaa daboolay villi, oo la siiyaa dhinacyada iyaga oo leh shuruudaha.
Caleemaha ubaxa ma kala duwan yihiin qiyaasta waaweyn, waxay sameeyaan burooyinkooda kareemka ah. Marka la furo ubaxa wuxuu u eg yahay suugo, waxa uu leeyahay xayawaannada ovalaha ee midab-casaan.
Miraha Berkutovsky ee Apple waxay leeyihiin qaab isku mid ah wareega. Cabbirka celceliska tufaaxa waa 150 garaam, oo ka sarreeya celceliska, tirooyinka ugu weyn ee gaari kara 250 garaam.
Tufaaxu wuxuu leeyahay dabool jilicsan oo leh jinni dhalaalaya, oo aan waxba ka jirin. Caadi ahaan cagaar cagaar ah, tufaaxu wuxuu leeyahay caaro guduudan oo ah qaabka jilicsanaanta.
Laga soo bilaabo maskaxda qoto dheer, jirku wuxuu koraa labadaba. Chambers waa weyn, waxaa ku jira miraha brown.
Isboortiga on a cut leh casiir leh, caddaan, ganaax-miro. Dhadhanka macaanku waa mid macaan iyo dhanaan, iyadoo ku xiran xaaladaha sii kordhaya. Dhibcaha dhadhanka ayaa udhow ugu dhow, inta u dhaxaysa 4.5 ilaa 4.8. "Berkutovskoe" waa noocyo kala duwan oo caalami ah, oo lagu taliyey in lagu isticmaalo cuntada cunugga, waa hypoallergenic.
Ma taqaanaa? Tufaax waa miro sacral ah oo muddo dheer ka qaaday qaybo caan ah oo awood leh. Dhacdooyinka uu ka qayb qaatay wuxuu noo yimid nooca halyeeyada, sheekooyinka caanka ah, sheekooyinka Kitaabka Qudduuska ah iyo noocyada kale ee dadweynaha.
Ubax ee geedka tufaaxa "Berkutovskoe" ayaa lagu rusheeyaa habka iskutallaabta, taas oo ah, waa mid suuragal ah in beesku dhow yahay. Ma aha mid xun haddii ay jirto apiary meel u dhow, iyo xataa si ka fiican si ay u rakibaan xoogaa yar oo shimbiraha yar oo si toos ah beerta.
Ma oggolaan karno xaalad marka dhirta Berkutovskoye ay koraan beerta, ma yeelan doonaan wax khiyaano ah. Maaddooyinka dhexdhexaadinta waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu beddelayo pollinators oo ku habboon noocyada kala duwan. Nidaamka noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa, tusaale ahaan "Northern Sinap".
Muddada Bisaylkiisa ee midhaha "Berkutovsky" waa jiilaalka dambe. Tufaaxu wuxuu gaadhay qaangaadhka dhammaadka Sebtembar ama bilowga Oktoobar, waqtigaas oo laga saaro geedkii oo loo diro, loogu talagalay kaydinta muddada dheer.
Apple "Berkutovskoe" waxaa loola jeedaa noocyo leh wax-soosaarkooda sare. Geedka qaangaarka ah, oo leh daryeel habboon, wuxuu siin karaa miraha miisaan dhan ilaa 70 kiilo.
Wareegtada "apple" waxay jecel yihiin shirkad wakiil oo noocyo kala duwan ah noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee noocyada noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan, Semerenko.
Tufaax aad u wanaagsan oo kala duwan ee "Berkutovskoe" waxaa lagu kaydiyaa ilaa March, iyo xaaladaha ku haboon - ilaa dhamaadka guga. Iyadoo loo eegayo gaadiidkooda sare, waxaa suurtagal ah in ay ku soo qaadaan fogaanta fog.
Ka hor inta aan la goostin miro barafka hore. Tan waxay badanaa dhacdaa bisha Oktoobar. Kala duwan waxaa lagu gartaa heer aad u sarreeya oo cimri dheer - illaa 200 maalmood.
Ka dib markii ay ka soo saarto tufaaxa ka timaadda cimilada qalalan, waxay kala soocaan oo kala soocaan.
Ku xoqida maro qoyan oo leh xalka glycerin ama salicylic acid waxay kordhinaysaa nolosha shelf.
Hayso miro waa in ay ahaataa mid heerkul u dhow eber, oo la daboolay lakabyo sanduuqyo alwaax ah oo la gashaday balka, warqad, maro ama caws.
Sanduuqyada waxaa lagu daaweeyaa lime mooro ah oo la qalajiyaa qorraxda.
Tufaaxa waxaa lagu keydiyaa sanduuq.
Ka hor inta aadan gelin qol diiran, tufaax waa in lagu hayaa qol qabow dhowr saacadood, taas oo u oggolaan doonta inay la qabsadaan xaalado cusub.
Gobolka gobolka Volga ee hoose, noocyada kala duwan ee jiilaalka-adag, sida ay u socdaan dhinaca waqooyiga, tayadaasi waxay hoos u dhacdaa. Sidaa awgeed, waxaa loo tixgeliyaa in kala duwanaanta ay leedahay celcelis ahaan hardeysiga jiilaalka iyo iska caabbinta abaarta. Gobollada leh roobab yaryar, sifooyinkaasi waxay bixiyaan faa'iidooyin faa'iido leh.
Apple "Berkutovskoe" waxay ka difaacdaa cudurrada badankood. Tani waxay hoos u dhacaysaa marka gobolka uu helo jawi sii kordhaya oo qoyaan ah kaas oo noocyada kala duwan ay saameynayso xagta oo budada ah.
Geedka waxaa laga helaa saameyntiisa, laga bilaabo caleemaha ubaxyada iyo caleemaha yar yar, waxay ku faaftaa inflorescences.
Caleenta budada ah ayaa la dagaallamaya adoo ku buufinaya guga leh fungicides ama bordeaux isku dar ah; diyaargarowga baarista ayaa caawin doona xagaaga.
Mararka qaarkood geedaha waxaa lagu soo weeraray burrooyin, suckers ama caarada, taas oo ay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo daawooyinka insecticidal iyo acaricidal.
Midhaha geedka tufaaxa "Berkutovskoe" waxay leeyihiin waxyaabo aad u fiican:
kor u qaadida difaaca;
hagaajinta isku dheelitirka acid-saldhiga;
oo daahirinta dhiigga.
ilaalinta heerka sonkorta ee ku jirta;
ka hortaga urolithiasis;
saar dheecaanka xad-dhaafka ah, yaraynta bararka unugyada;
saameyn ku leh maaddada dheef-shiidka, joojinta koritaanka unugyada kansarka;
Tufaaxa ayaa lagula talinayaa isticmaalka cuntada ilmaha, maqaarkooda, oo ay ku jiraan qu'feetka antioxidant, gaar ahaan waxtar leh.
Waa muhiim! Haddii aad cuntid gebi ahaanba tufaax, miraha aya siin doonta jirka oo leh heer maalinle ah oo iodine ah. Waxay ka kooban yihiin waxyaabo kale oo waxtar leh: potassium, kaas oo caawiya wadnaha, fitamiin B17, taasoo ka hortagaysa koritaanka unugyada kansarka, walxaha ka baxa maqaarka wajiga. Si kastaba ha noqotee, halis ayay u tahay in la dhaafo qiyaasta maalinlaha ah ee 6da miraha, sababtoo ah waxay ka kooban tahay qadar yar oo ah hydrocyanic acid, qiyaaso yaryar, oo ay isticmaalaan jirka oo aan waxyeello u geysan caafimaadka. Daaweynta kuleylka sidoo kale waxay gebi ahaanba burburisaa.
Darajada "Berkutovsky" ayaa ka dhigaysa tartan qiimo leh oo lagu soo saaro miro la keenay xilliga qaboobaha. Miraha waxaa loo isticmaalaa labadaba qaab cusub iyo goynta. U dalbashada nadaafada iyo xitaa ujeedooyinka qurxinta.
Cunto qaadashada si joogto ah, waxaad jidhka u siisaa walxo waxtar leh, taas oo ka caawisa kor u qaadista difaaca iyo iska caabida muddada xiliga SARS.
Xeerarka lagu iibsado geedo tufaax ah
Haddii doorashadaada ku dhacdo fasalka "Berkutovsky", waxaad ka welwelsan tahay su'aasha ah sida loo doorto geedo tufaaxa saxda ah.
Marka la soo iibsanayo, waxaa lagula talinayaa inaad raacdo xeerarka:
waxaad ka heshaa alaab ka wanaagsan xannaanada, si aad u hesho kalsooni noocyada kala duwan ee aad helaysid;
haddii xannaanada aan la heli karin, waxaad ka iibsan kartaa alaab laga beero beerta qurxinta, laakiin si aad uga badbaadiso khiyaanada, waxaa lagugula talinayaa inaad kormeerto goobteeda oo aad hubiso in dhogorta noocyada kala duwan ay ku jirto xaalad wanaagsan;
ka digtoonaadaan geedo iibsasho ah suuqa, boostada, iyada oo loo marayo internetka: khatarta khiyaanada waa mid aad u sareeya;
Ogolaan geed biennial ah oo da'yar ah, da'daani ma noqon doonto mid u nugul cudurada isla markaana si degdeg ah u bilaabi doonta sababo la xiriira xaqiiqda ah in xididka qalfoofka horey loo sameeyay iyo xididdada xayawaanka ah ayaa la keydiyay marka qashin;
daryeel waa in loo qaadaa si loo ilaaliyo nidaamka xididka dhaawaca iyo xiro;
Nidaamka asalka ah ee laftiisa waa in la sameeyaa, xididada yaryar iyo xididdada la soo bandhigo, waa inaysan jirin waxyeelo iyo koritaan;
Caleenta geedo yaryar waa in aan la dhaawacin, burooyinkuna way jilicsan yihiin, noolaadaan gudaha.
Waa muhiim! Haddii nidaamka xididka ah ee geedo iibsigu furan yahay, waa in lagu beeraa sida ugu dhakhsaha badan, waa la oggol yahay in lagu keydiyo maro qoyan ee dhulka hoostiisa aan wax ka badan 4 maalmood. Nuqul ka mid ah nidaamka xididka ayaa xiran karaa dhawr asbuuc ama dhowr bilood, iyadoo la raacayo in ciidda si joogto ah loo waraabiyo.
Abuuritaanka geedo tufaaxa "Berkutovskoe"
Geedka tufaaxa "Berkutovskoe" waxay ku dhacdaa sida caadiga ah ee xeerarka caadiga ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sifooyin gaar ah:
Sababtoo ah in aan la nadiifin karin qoyaanka xad-dhaafka ah ee la gooyey beerashada qoyaanka iyo meelaha qoyan;
waa mid aad u macquul ah haddii beerta waxaa jira apiary oo leh shinni oo gacan ka geysta pollination guul leh;
masaafada u dhexaysa dhirta la beeray waa in ka badan 3 mitir;
qaybaha ka dib marka laga saaro jajabyada qallalan iyo qallalan ee nudaha caafimaadka leh waxaa lagu baari karaa mashiin dhoobo ah;
Waqtigee waqtiga dhirta geedka tufaaxa, waxay ku xiran tahay cimilada gobolka. Tusaale ahaan, gobollada koonfureed kama cabsan kartid geedo lagu beeray dayrta. Laakiin asaasiga ah, geedka tufaaxa waa dhir diidan oo adag, taas oo daryeel wanaagsan oo xiga loo qorshayn karo labadaba guga iyo dayrta, iyo xitaa xaaladaha gaarka ah ee xagaaga.
Qodobbadu waxay yeelan doonaan wakhti si ay u caleemo fiican u soo baxaan ka hor, ka sii xoog badan inta lagu jiro jiilaalka iyo tagaan koritaanka guga.
In sabuurada lagu beeray dayrta, difaacu waa mid xoogan, iyo dhaxan guga ma aha khatar.
Laga soo bilaabo guga barafka guga waxay u helaan qoyaan, iyo isaga oo leh nafaqooyinka.
By xilliga qaboobaha, geedo la filayo in la daboolo, iyo ciidda waa mulched si looga hortago dhibaatada dhaxan si xididdada iyo caleemaha.
Dayrta gobol kasta waxay timaaddaa waqtiga saxda ah, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa in xooga la saaro dhamaadka caleen dayrta. Si kastaba ha noqotee, saadaalinta waa in la darso: geedka tufaaxu wuxuu u baahan yahay 2-3 usbuuc inuu xididayo, xiligaan waqtigiisu waa mid aan loo baahnayn.
Waa muhiim! Beeraha xilliga dayrta, dhirta hal-iyo laba-sano jirku waa kuwo wanaagsan, kuwaas oo si ku filan u habeeyey qaabkoodii rootiga si ay ugu habboonaadaan. Da'da 3-5 sano jirka ah waa in la beeraa inta udhaxeysa jiilaalka si fiican. Xaaladaha qaarkood, waxaa xitaa ka wanaagsan in tan la sameeyo xilliga qaboobaha, taniyo geedka xaalad dormancy jiilaalka ayaa si fiican uga falcelin doona isbedelka booska iyo qaadashada asal ahaan ka sii wayn.
Soo degitaanka guga
Guga, waxaad u baahan tahay inaad sugto dhulka si ay u kululaadaan ka hor inta aan laga beerin geedka tufaaxa ah. Xaaladaha badankood, tani waa dhammaadka Abriil iyo bilowga Maajo.
Waad ka welweli kartaan, sida sapling ay ku wareejin doonto jiilaalka.
Si ay geedku u qaataan xididka, waxay u baahan tahay biyo badan, markaa tufaaxa beerto guga waa in la si badan u waraabiyo.
Aad ayay u adagtahay xilliga gu'ga si loo helo waxyaabo miro leh, iyo kharashkoodu aad ayuu u sarreeyaa.
Dhibaatada beeritaanka gu'ga waa sii wadidda qoyaanka ciidda heer fiican. Caleemaha maalin ka hor laga beerto waxay u baahan yihiin in lagu hayo weel biyo ah, iyo ka dib geedka ayaa dhulka ku jira - in mulch. Tani waxay lagama maarmaan ahayn ma aha oo keliya in lagu hayo qoyaanka, laakiin sidoo kale si looga hortago koritaanka haramaha.
Waa muhiim! Guga, waxaa lagu talinayaa in ay ku beeri geedo aad u yar, xaq u leeyihiin iniinaha abuuray. Sidaa darteed, waxay yeelan doonaan wakhti ku filan waxayna awoodi doonaan inay sii xoogaystaan ​​xiliga xagaaga.
U soo guurista xagaaga
Khatarta beeritaanka xagaaga waa in ay jirto halis ah in aaney helin qadarka saxda ah ee nafaqooyinka iyo qoyaanka.
Ka dib markii geedka waa dhulka, waa inay ahaataa pritenyat qorraxda kulul.
Geedka dhalidda ayaa u baahan doona in si taxadar leh loo waraabiyo oo si joogto ah loo quudiyo.
Shuruuda waa shuruuf badalashada wareegga wareegga.
Waa muhiim! Xaalad noocan oo kale ah, inkasta oo ay dhif tahay naadir, weli waa suurtogal Tusaale ahaan, waxaa jira baahi deg-deg ah oo loo qabo in laga gooyo geed ka timaada meesha uu koray.
Waqooyiga, qorraxda qorraxda badan waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato. Goboladaas oo ay jiraan maalmo diiran oo xagaaga ah xagaaga, goobaha ku yaalla koonfurta ama koonfurta-galbeed waa suurad wacan. Meesha xagaaga waa kulul iyo mid biyo ah, waa inaad bixisaa doorbidada dhinaca waqooyiga.
Meelaha saafiga ah ma jiro socod, halkaasoo hawada qaboobuhu ay geli doonto xilliga guga inta lagu jiro dhaxan, waxay noqon kartaa mid la mid ah geerida ubaxa.
Nidaamka talaabo tallaabo tallaabo ah
Abuuritaanka geedka tufaaxa maaha wax dheer, oo u baahan xirfado iyo aqoon.
Ceelku waa inuu horay u diyaargaroobaa, bilaa bil ka yar. Baaxaddiisu waa 0.5 x 0.5 mitir oo qoto dheerna waa 0.7 mitir. Xarunteeda waa in lagu gubo meesha ugu hooseysa ee qoryaha alwaaxa leh dhexdhexaad ah oo ah 5 sentimitir, taas oo kor u qaadi doonta 45 inji oo ka sarraysa dhulka.
Waa muhiim! Aad bay muhiim u tahay in godkii uu ahaa mid ballaadhan, oo ciidda ku jirta si taxadar leh ayaa loo daboolay. Tani waa fursada kaliya ee maaraynta tayada, ka dibna xididdada geed lagu beeray way ka hortagi doonaan tan.
Haddii ninkii beerta ka shaqeeyaa ugu yaraan muddo bil ah iyo badh, waa inuu ku daraa Bacriminta organic iyo macdanta dhulka si ay u bilaabi karaan inay waxyeello u geystaan ​​ayna ku gubaan nidaamka xididka. Hore kasta oo 2-3 baaldiyo ah compost, peat ama humus ayaa la keenaa, hal galaas oo ash, galaas ah superphosphate iyo qiyaastii 100 garaam oo ah sulfate potassium. Isku dar ah Bacriminta ka hor inta aan la gelin godkii waa in lagu qaso dhulka.
Haddii ay dhacdo dhul aad u cufan waxaa lagula talinayaa in la siiyo hoosta ceelka leh lakabka dheecaan leh. Marka ay tahay wakhtigii lagu beeray, dalool waxaa lagu sameeyey ciidda, carrada madow waxa lagu shubay hoose ee foomka tuulada.
Baaritaan iyo xor ka ah jajabyada qalalan iyo lowska, xididdadu waxay ku faafaan boodbood.
Waa muhiim! Qoorta aasaasiga ah ka dib markii laga beerto waa inuu kor u kaco heerka ciidda 5 centimitir. Goobta heerkan ka hooseeya waxay u oggolaanaysaa in geedka tufaaxa si dhakhso ah loo qaato xididka oo dabadeedna loo yareeyo wax soo saarka joogtada ah, ka sarreeya - wuxuu ka dhigi doonaa xanuun la'aan joogto ah. Wax ka badalida wax shuruud la'aan ma noqon doonto.
Hooska godka waa in la daadiyaa wax yar, lakab kasta waa in la isku dhejiyaa si aysan jirin hulaaqyo bannaan.
Ka dib markii laga beerto, seedling waa in loo xirxiraa godka sugitaanka godka, samaynta wareegga bilaash ah ee qaab shaxan sideed ah. Tani waxay lagama maarmaan u tahay in laga hortago in dhirta laga bilaabo degitaanka iyo in laga ilaaliyo dabaylaha dabaysha.
Ugu yaraan 3 baaldiyo oo biyo ah waa in lagu shubo wareegga wareegga foosto oo lagu qasay lakab 5 cm.
Geedo cusub oo la beeray ayaa si weyn u waraabiyey, mulched ku wareegsan leh peat ama humus. Haddii seedling xidhxidhnaa weli wiigga ka soo baxa dabaysha, xaji carrada ku dhow.
Goobta geedka tufaaxa "Berkutovskoe" waxa uu xoojiyaa sifooyinka daryeelka xilliyeed xilligaas. Asal ahaan waxay hoos u dhacdaa:
in la gooyo;
Dulqaadka abaarta sida hanti dabiici ah oo kala duwan ayaa muuqan doona dhowr sano, iyo ilaa inta loo baahan yahay in si taxadar leh loo eego in geedku helo qoyaan ku filan. Sannad kowaad, gaar ahaan xagaaga qallalan, waxay u baahan tahay laba ama saddex jeer waraabinta.
Waa muhiim! Распространенная ошибка - полив небольшими порциями. Haddii ciidda aysan kuusan dherer ku filan, markaa xididada qoyan ee u dhow dusha sare ayaa kor u kici doona, taas oo keenaysa in geedku u xanuunsado kuleylka iyo qabowga.
Waxaa lagama maarmaan ah in la mariyo biyo badan si ay biyuhu u gaaraan xididdada qoto dheer. Miisaanka biyaha waa inuu ahaadaa ugu yaraan 50 litir. Waraabinta waraabka waa xulasho weyn, oo aan ku habooneyn xayndaabka ciidda.
Ma jiro habka muhiimka ah ee muhiimka ah waa waraabinta, taas oo ah habboon in la fuliyo habka rushaynta. Waxay ka nadiifisaa caleenta cayayaanka iyo wasakheynta, guud ahaanna waxay saameyn ku leedahay horumarinta taajarka.
Ka dib markii habka waraabinta, waa mid aad u macquul ah si ay u fuliyaan xakamaynta gacmeed ee carrada ee wareegga garabka. Waxay ka hortagi doontaa samaynta daloolka iyo bixinta aeration.
Fursad wanaagsan oo lagu hagaajinayo dhismaha carrada - siderats, taas oo saameyn ku leh iyada oo xididdadiisa. Waxay sidoo kale ka ilaaliyaan uumiga degdeg ah ee qoyaanka. Cannaanka cagaaran ee cagaarka ah oo caleenta ku dheji oo u leexo mulch. Muddo sanado ah, gooryaanka iyo jeermisyada ayaa isu rogi doona lakabka lakabka carrada bacrin ah.
Boogaha waa in la burburiyaa ka hor intaanay siinin abuurka dabaysha, shimbiraha, xayawaanka. Haddii cagaaruhu ku wareegaan goobo agagaarka geedka, waxay si gaar ah khatar u yihiin. Marka laga soo tago in cuntada laga qaato geedka tufaaxa, waxay awoodaan, iyadoo ay caawimaad ka helayaan xididdadooda, si kor loogu qaado nidaamka xididka geedka tufaaxa, oo u dhow dusha sare. Iska ilaali cawska, waxay awoodi karaan, inay jajabaan, u baxaan sida mulch. Mulch ciidda si loo ilaaliyo qoyaanka iyo hagaajinta aeration ee nidaamka xididka. Hilib iyo cows ayaa ku habboon ujeedadaas.
Waa muhiim! Qasab aan lagu talin in ay isticmaalaan - waxay kordhin doontaa aysidhka ee ciidda.
Daqiiqada lakabka lakabka saaran waa in aan la sameynin si looga fogaado cayayaanka iyo jiirarka waxyeelayn kara geedka. Kuleylka geed ayaa keeni kara cudurada fangas.
Saplings of sanadkii ugu horeeya uma baahna bacriminta, haddii habka loo diyaariyo ceelka si sax ah loo fuliyay - geedka lahaa lahaa ku filan ee ballanqaadka markii beeritaanka quudinta.
Ka dib goosashada, geedka tufaaxa waa in lagu mahadnaqaa digada ama compost.
Waa muhiim! Goobta bacriminta dayrta waa inaysan jirin nitrogen - waxay ka hortagi doontaa diyaargarowga jiilaalka, taas oo la yareeyo raasamaalka nafaqooyinka ee unugyada iyo jilifka geedka. Laakiin guga ee daaweynta nitrogen noqon doonaa mid waxtar leh, waxay ka caawin doontaa geed si ay u kordhiyaan mass cagaaran.
Wixii ubax wanaagsan ee guga iyo fruiting xagaaga, geedka ma dhaawacaan si loo siiyo slurry.
Bacriminta waa in aan laga dhigin xididka asalka ah, waxaad u baahan tahay inaad soo celiso 0.5 mitir.
Sababtoo ah caabbinta noocyada kala duwan ee cudurrada kala duwan ee dhirta geedaha ah ayaa ku xiran, geedka tufaaxa wakhtiga caadiga ah wuxuu u baahan yahay kaliya tallaabooyin yar oo ka hortag ah.
Ka hortagga wuxuu ka kooban yahay laba dhajin guga oo ah dhoowraadyo leh diyaar garow gaar ah.
Buufinta ugu horeysa waxaa loogu talagalay in la baabi'iyo fungi iyo dulinyo in ka badan ciidda iyo garbaha.
Iyadoo kaalinta labaad, waxay burburiyaan infekshannada iyo cayayaanka oo waxyeeleyn kara ugxan-yari soo muuqday.
Haddii sanadka roobka la soo saaro, geedku wuxuu halis u yahay dhibaatada. laga bilaabo xagta udugga - Tani waa muuqaal ah noocyada kala duwan.
Laga soo bilaabo cudurrada tufaaxa u doorbidaa daroogooyinka Scor, Topaz, Hom, Fitosporin-M.
Sannadihii ugu horreeyay ka dib markii la beero manjooyin geedo yar yar waa muhiim. Manjooyin nadaafadeed ayaa qaabeyn doona qaabka taajka ah waxayna ka ilaalinayaan geedka lafaha iyo daciifka.
Qoryaha adag ee geedaha qaangaarka ah waa in sidoo kale khafiif ah. Iyadoo gacan ka geysashada manjooyin waxay ka saaraan lafdhabarta, cayayaanka iyo bukaanka, oo bixiya inta kale nalalka ugu badan iyo nafaqada.
Ilaalinta Frost iyo Rodent
Xilliga jiilaalka, jiirka ayaa la mid ah xayawaanka iyo jiirka jacaylka ah in la cuno gogolka geedaha yar yar. Si looga hortago tan, jirridda waxaa si adag loogu duubaa caleemo gabbaldayaha ama laamood oo kale, sidaa darteed ma jiraan wax khilaaf ah. Xayawaanka waa in si buuxda u xiran yihiin, lakabka ilaalinta ee ku jira ciidda si qoto dheer ah 5 sentimitir. Qiyaas isku mid ah ayaa ka caawisa in si fudud loo noolaado hargabka.
Apple "Berkutovskoe", oo ah noocyo kala duwan, ayaa u diiriya qaboojiyaha qaboobaha si fiican. Si kastaba ha ahaatee, ma noqon doonto mid aad u macquul ah in shtamb iyo lafaha skeletal laga bilaabo dayrta, kaas oo siin doona difaac ka soo dhaxan, oo aan guga, marka saameynta nidaamka this yar yahay.
Xilliga jiilaalka, waa inaad iska daadisaa dharka uu ku xirnaa laanta si loo ilaaliyo jabka iyo dhaawac kale.
Xilliga jiilaalka, miraha koray dhulkooda, ayaa bixin doona fayladda lagama maarmaanka ah ee fitamiinada. Geedka tufaaxa ee "Berkutovskiy" noocyo badani ma keeno dhibaato badan, beerashaduna kama duwo beeritaanka geedo kale oo tufaaxa kale ah, iyo daryeelka geedaha sida ugu yar. Isla markaa, waxay leedahay sifooyin qiimo leh, waxay ku habboon yihiin gobollada bartamaha dhexe waxayna si khaldan wax u dhicin.
Geedku waa mid adag, midho dhalaalaya, baraf u adkaysta oo si sahlan u daryeeli kara, miraha midabkeedu wuxuu leeyahay dabeecado dhadhan sare leh waxaana lagu soo saaraa maadooyin qiimo leh. Geedkan tufaaxa ayaa u qalma inuu qurxiyo beerta.
Daroogada Veterinary "Kantaren": halabuurka, qiyaasta, barista
Ka ilaali boggaaga! Wuxuu kufadhiyaa boodhadhka bisadaha iyo hababka kale ee taliyaha ka soo boodada iyo shilinta
Broilers Cobb iyo Ross
Sporysh (buuraleyda) waa warshad cagaaran oo inta badan lagu isticmaalo daawada dhaqameed. Waa wax aan qabin carrada, si ay u si fiican u koraan on carrada iyo dhoobo dhoobo. Sporez ayuu ku soo celiyaa abuurka. Goobta dhirta galkani waa mid si buuxda u ah dhulalka CIS. Fasiraadda Knotweed waxay leedahay tiro badan oo ah noocyo hoose, kuwaas oo ay kala soocaan xayndaabyada botanical. Read More
Qiray Xayawaanka Bannaanka - Tamaandho Fasalka Pink Pink
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geed geedeedka 2020